DAAWO: Mustaf Dhuxuloow oo ku baaqay in Si xoog ah Villa Somalia looga saaro Mw Farmaajo - Banaadisom
Home Arimaha Bulshada DAAWO: Mustaf Dhuxuloow oo ku baaqay in Si xoog ah Villa Somalia...
DAAWO: Mustaf Dhuxuloow oo ku baaqay in Si xoog ah Villa Somalia looga saaro Mw Farmaajo
Musharaxa xilka madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada 2021 Mustaf Sheekh Dhuxulow ayaa weerar culus ku qaaday madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxa uu sheegay in maanta uu golaha shacabka horyimid Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble isla markaana uu shaaciyey inay waxba ka qaban waayeen doorashada guud ee Soomaaliya.
“Madaxweynaha waa dhegaysateen maalin dhoweyd khudbadiisii, hadalkiisa wuxuu ku soo gabagabeeyey talo gacanta kuma hayo dowlad goboleedyadiina waa ka soo quustay, waa ogtihiin hadana shalay wuxuu soo tuuray Twiter uu ku leeyahay shir ayaa lagu qabanayaa Garoowe, taasina waxay ku tusinaysaa in M/weyne Farmaajo oo waqtigiisii dhammaaday 8 Febraayo uusan dalkaan sharci ku maamulayn” ayuu yiri xildhibaan Mustaf Dhuxulow.
Waxa uu sheegay in madaxweynaha sharciyaddii ka dhammaatay isla markaana uu isku deyayo inuu amar siiyo ciidamada kala duwan ee dowladda iyo xukuumadda xilligaan dalka kajirta ee Soomaaliya loona baahan yahay inuu xafiiska banneeyo.
“Beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in madaxweyne Farmaajo sharciyadii ka dhammaaden aysan ciidamadu amar ka qaadan, aysan safaaraduhu amar ka qaadan sidaas daraadeed talada dadka Soomaaliyeed waxa ay gacantooda kujirtaa dowlad goboleedyada, barlamaanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed, sidaas daraadeed Farmaajo madax dalkaan kama ahan xaqna uma lahan inuu madaxtooyada kujiro” ayuu yiri markale.